फ्रान्सेली मैनीक्योर ब्रश
हरेक केटी सुन्दर र राम्रो-groomed नङ को सपना। उच्च गुणस्तरीय मैनीक्योर ध्यान, हात संग सजाया आकर्षित र व्यक्तित्व र शैली underlines। सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार को एक फ्रान्सेली छ, यस्तो डिजाइन पहिले नै क्लासिक भएको छ।
क्षणमा, त्यहाँ जो यो एक लोकप्रिय र अद्वितीय बनाउन यो शैली धेरै भिन्न छन्।
क्लासिक। एक फ्रान्सेली मैनीक्योर लागि लिइएको Tassel, त्यसपछि यसको नङ टिप सेतो मा रंग छ, र आकार "मुस्कान" दोहोरिदैन निःशुल्क किनारा मा।
फ्रान्सेली-मिलेनियम। यो कि किनारा सेतो टोन, र सेक्विन द्वारा कवर छैन पहिलो भिन्न हुन्छ। तथापि, बाक्लो हुन आवश्यक बनावट पारदर्शी छैन प्लेट गर्न।
रंग। यसको मुख्य विशेषता कुनै पनि छाया को टिप कोरिएको छ। र पनि मैनीक्योर पनि अधिक अद्वितीय र रोचक बनाउन भनेर ढाँचा थप्न सक्नुहुन्छ।
प्रशंसक ज्याकेट। यो प्रजाति जो नङ सजाया विशेष सामाग्री, अर्थात्, सुकेको फूल, bulonki, क्रिस्टल, अभ्रक पन्नी, आवश्यक छ। तिनीहरूले अलग कार्यान्वयन गर्न दुवै र संयुक्त, र यदि तत्व ग्राहक हस्तक्षेप हुनेछ, यी कोटिंग्स एक विशेष सामाग्री मा छाप छन्।
अनुकूलन। विभिन्न आकार मुस्कान लाइन। यसलाई कुनै पनि हुन सक्छ - र त्रिकोणात्मक र sloping र कल्पना प्ले जस्तै undulating। मुख्य कुरा यो सबै संग आधारभूत विचार ज्याकेट रहेको छ - नङ किनारा फरक रंग मा चित्रित छ।
परिणामस्वरूप प्रभाव प्रक्रिया अघि सकेसम्म लामो समयसम्म सतह मा लामो क्रममा ह्यान्डल ल्याउन पर्छ। यी छाला को स्नान mitigate गर्न आवश्यक छ, विशेष गरी यदि अग्रिम मा कदम, कम्तिमा एक घण्टा छन्।
को cuticle बारेमा भूल छैन, यस को लागि तपाईं यसलाई बिस्तारै छडी वा कटौती धक्का गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ एक आवश्यकता छ भने, त्यसपछि यो तेल वा sanding ब्लक हिंड्न। सुनिंनु, बार्बिसेल वा कुनै पनि नङ बिगार्छ को अनुचित ह्यान्डलिङ। तपाईं पर्याप्त अनुभव हुनुपर्छ, गर्न पनि सबै भन्दा सरल फ्रान्सेली मैनीक्योर ब्रश। सायद यो प्रविधी छैन पहिलो पटक हो, र नङ धोए गर्न आवश्यक हुनेछ र त्रुटि को छुटकारा प्राप्त गर्न पुन लागू हुन्छ। त्यसैले यसलाई पुन एकदम लामो समय हो जो सतह, खण्डन रूपमा प्लेट बिगार्न छैन ताकि, एसिटोन बिना तरल रिमुभर प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
एक ब्रश, रंग-आवश्यक आधार र प्राकृतिक छाया, साथै फिक्सर संग फ्रान्सेली मैनीक्योर पूरा गर्न।
को नङ-कट वा हार्डवेयर प्रशोधन। त्यसपछि सतह सुरक्षा तह लागू गरिएको छ।
सेतो Lacquered निःशुल्क किनारा द्वारा कवर। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि, तपाईं एक मुस्कान लाइन आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, र एक ठूलो पछि पातलो ब्रश संग बाँकी ठाउँ आकर्षित। कोटिंग शिथिल वा unevenly तल राखे छ भने, यो धेरै पत्रहरु मा लागू गर्नुपर्छ र सबै असल कठोर नगरेसम्म त्यसपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
त्यसपछि प्राकृतिक वा पारदर्शी रंग को सम्पूर्ण प्लेट माथि चित्रित। पछि पूर्ण solidification ढाँचा तय गरिएको छ।
एक ब्रश संग काम
धेरै महिलाहरु पनि उपकरण प्रयोग बिना, एक मुस्कान को रेखाचित्र सामना गर्न पर्याप्त सजिलो, बस रंग हो, र केही नङ पालिस लागि ब्रश को एक विशेष सेट प्रयोग गर्नुहोस्।
क्रममा तरिकाले ज्याकेट गर्न, पर्छ तपाईं:
प्रत्येक नङ मा झुकन किनारा नियन्त्रण;
केन्द्र आधार अन्त देखि आएको;
प्राकृतिक रंग पूर्णतया regrown बुझ्दा मुख्य प्लेट केही मिलिमिटरमा संग पन्जा;
त्यहाँ त्रुटि सजावट देखा पर्यो छ भने, त्यसपछि तरल कोटिंग हटाउन र यसलाई समाधान गर्न एक कपास swab moisten;
एक सपाट टिप संग एक उपकरण लागू गर्न मुस्कान लाइन।
प्राकृतिक र कृत्रिम हात
कृत्रिम उपकरणहरू उच्च गुणस्तरीय पलिमर बनेको छन्। उनि धेरै सस्ता छन्, तर धेरै कम पछिल्लो हुनेछ। सामान्यतया, यी सरल रेखाचित्र प्रदर्शन गर्न चाहने, साईट मास्टर चयन गरिएका छन्।
नियम, तिनीहरूले प्राकृतिक ऊन स्तम्भ वा सेबल बनेको छन्। राम्रो हेरचाह तिनीहरूले लामो पर्याप्त सेवा गर्नेछन् उच्च गुणस्तरीय ढेर धन्यवाद। यी उपकरणहरू तस्वीर रंग को कुनै पनि प्रकारको सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
फ्रान्सेली मैनीक्योर, गरे ब्रश प्रयोग गरेर सधैं अन्य embodiments कोटिंग भन्दा चिटिक्क र सुन्दर देखिन्छ। तपाईं पूर्णता हासिल गर्न मद्दत गर्न विभिन्न उपकरणहरू छन्। थुप्रोअगाडि को मोटाइ 8 कहाँ00 देखि मूल्य मा नम्बर निर्धारण गरिन्छ - सबैभन्दा ठूलो संकल्प - सानो छ, र 8।
पातलो ब्रश मैनीक्योर - लाइनर, यो एक यस्तो vectorization मुस्कान लाइन को लागि उपयुक्त उपकरण2सेमी2मिमी को एक आकार छ ..
प्रशंसक, उनको ढेर एक प्रशंसक को रूप मा प्रस्तुत गरिएको छ। चमक र सेक्विन राख्न यो धेरै सुविधाजनक छ।
0.5 1 मिमी को एक चौडाई संग पातलो ब्रश। यो curlicues, निःशुल्क किनारा मा सानो डिजाइन तत्त्वहरू आकर्षित गर्न राम्रो हुन सक्छ। यो लाइन आकर्षित गर्न उपयुक्त पनि छ। एक उपकरण प्रयोग गरेर एक निश्चित dexterity presupposes।
Flat - ढाँचाको व्यापक आवेदन लागि आदर्श, साथै निःशुल्क छेउको toning। यस्तो उपकरण संग काम कुनै पनि कठिनाई, मास्टर आफ्नो सजिलो, पनि शुरुवात लागि समावेश छैन।
फूलको दल। नेत्रहीन अघिल्लो एक धेरै समान, मात्र यो एक beveled किनारा छ। यो अक्सर प्रयोग गरिन्छ चिनियाँ चित्रकला, तपाईं सुन्दर र चिटिक्क पत्रदल सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
त्यहाँ उपयुक्त छ जो जसको लागि राम्रो परिभाषित मास्टर सीधा, त्यसैले हरेक मानिस आफ्ना उपकरण छानिएको नङ पालिस, को लागि ब्रश को एक विस्तृत विविधता हो। तपाईं नङ कला गरिरहेको सुरु गर्नु अघि, यो नियम अनुसार पनि आफूलाई लागि पाठ्यक्रम लिन र डिजाइन पूरा गर्न, सिफारिस गरिएको छ।
कसरी ब्रश हेरचाह गर्न
नयाँ ब्रश, यो मा सुरक्षा तह, सबै भन्दा राम्रो तरिका हुनुपर्छ जो हटाउनु भने लागू गर्नुपर्छ। यो बिस्तारै kneaded fluff कपडा कवर, र हटाइएको छ त्यसपछि उपकरण न्यानो पानी अन्तर्गत rinsed छ।
ब्रश मात्र यसको अभिप्रेत उद्देश्य लागि प्रयोग हुनुपर्छ, अन्य कार्यहरू यसलाई विरूपण र villi को हानि हुन सक्छ। तसर्थ, थप काम कठिन हुनेछ।
एक ब्रश मैनीक्योर सेट पछि, चिसो पानी मा उपकरण, समय को पनि एउटा सानो रकम नछोड। कुनै पनि कार्य फारम को परिणाम बिग्रन भने, यो 90 ° सी मा पानी मा केही मिनेट को lowering धन्यवाद फिर्ता गर्न सम्भव छ
काम पछि ब्रश मा रंग नछोड। त्यो केवल तरल नङ पालिस रिमुभर धोएका, र यो ढेर मा नकारात्मक प्रभाव छ।
प्यालेट लागि यस्तो चमक, यो एक उच्च गुणवत्ता ढेर कायम गर्न मद्दत गर्नेछ, एक चिल्लो सामाग्री प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, वा त्यो फीका गर्न सुरु गर्न संभावना छ। र यो नै परिणाम निकै नेतृत्व गर्नेछन् कि, नैपकिन बारेमा कडा wiping पछि कुल्ला गर्न आवश्यक छैन। यो cuticles लागि तेल यसलाई चिल्लो गर्न सिफारिस गरिएको छ अपरेसन पछि धेरै लामो लागि ब्रश बचत गर्न।
फ्रान्सेली मैनीक्योर लागि सुझाव
तपाईं नङ-कला को एक मास्टर छैनन्, तर एक घर-प्रेम आंकडा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं subtleties केही जान्नु आवश्यक छ।
बरु, तदर्थ आधार अक्सर पारंपरिक clearcoat प्रयोग।
तपाईं पलिश stackers किन्न र विकास को प्राकृतिक लाइन मा तिनीहरूलाई छडी गर्न सक्नुहुन्छ। कि पछि, लेबल को भाग माथि रंग एक ब्रश प्रयोग गरेर।
यसलाई अन्यथा कोटिंग एक लामो समय को लागि ड्राई हुनेछ र पनि माथि कर्ल र सबै बिगार्छ गर्न सक्छन्, सुझाव पनि बाक्लो छन् रंग गर्न आवश्यक छैन।
गुलाबी वा स्पष्ट वार्निश लागि पर्चा प्रयोग, त्यसपछि यो नङ टिप रंग गर्न सजिलो हुनेछ।
आफ्नो हात को अवस्था जाँच, तिनीहरूले सफा र राम्रो groomed हुनुपर्छ।
यो लोचदार प्लेट को शीर्ष मा कस्नु गर्न सम्भव पनि छ। उदाहरणका लागि, एक मैनीक्योर ब्रश प्रदर्शन, तपाईं एक सीधा लाइन आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै तयार भएपछि, भ्काडी छोट्याउन।
यो नङ को टिप ढाक्न गाह्रो छ भने, तपाईं यसलाई बाहिर प्राप्त भएन रंग गर्न पर्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मानिसहरूको बहुमत अनुसार, यो तिनीहरूलाई sexiest मैनीक्योर जस्तो fatigues। त्यसैले, यो त अक्सर विवाहित बीचमा देखेको वा महिला को एक जोडी हो छ। साथै, डिजाइन को यस प्रकारको यो एक राम्रो-राखिएको र कम प्रमुख उपस्थिति प्रदान गर्दछ रूपमा, व्यापार सभाहरूमा लागि सिद्ध छ। धेरै बालिका झन् विशेष ब्रश प्रयोग गरेर घर को एक रेखाचित्र बनाउन सिक्न छन्। समीक्षा जो केवल सकारात्मक छन् मैनीक्योर, यसलाई हुनत यो मूल पेरिस बनाइएको थियो र फैशन शो को लागि प्रयोग गरिएको छ, सारा संसारलाई जितेको छ। यो नयाँ कपडे लागि स्थिर repainting नङ मोडेल को स्टाइलिस्ट सुरक्षित गर्न आविष्कार भएको थियो। डिजाइन, कुनै पनि outfit लागि उपयुक्त, चाँडै सबै दुनिया भर मनपर्ने महिलाहरु भयो।
कसरी घर मा 1 दिन को लागि आफ्नो नङहरु बढ्न?
Ingrown नङ: लेजर पृथक्करण, र उपचार को मुख्य चरणमा को कारण
रातो र कालो नङ डिजाइन: रोचक विचारै, संयोजन र सिफारिसहरू
घर मा जैव-जेल कसरी प्रयोग गर्ने
नङ फैशन 2012: नङ पालिस चुम्बकीय र craquelure
ल्याक-जेल ज्याकेट - आफ्नो हात को inviolable सौन्दर्य!
ग्रीक Hairstyles लागि प्रयोग गरिएको पट्टी
खुम्च्याउने बेल्ट: मोडेल, प्राविधिक विशेषताहरु र वर्णन
पुनरावेदन, गति, को मा मूल्य र नाम मिसिन को "GTA: San Andreas"
नदी माछा को तयारी। आक्षेप ओवन मा सुखा
टर्की, ओवन मा सुखा
OHP - यो के हो र यसको सुविधाहरू के हुन्?
राष्ट्रिय जर्मन व्यञ्जन
तर मेंहदी "Phytocosmetics"। उपभोक्ता समीक्षा, उपकरण विवरण
भिटामिन बी कम्प्लेक्स - आफ्नो "शक्ति" के छ।
सजावट वा किन्ने, तर प्रमाणित
किन यो घरेलु मा विकल्प बन्द गर्न आवश्यक छ नोवोसिबिर्स्क मा "बन्द"